Kinetic Typography bụ ewu ewu nnọọ na oge, na ezi ihe mere, ya anya uku, ọ na-enyere ị na-agwa a akụkọ na dị nnọọ ruru eru ka YouTube, nke bụ otu ebe kediegwu ibu maka okike video.
Na a na nkuzi na anyị na-aga ele anya na ihe ndị bụ isi nke na-eke a obere ederede na-aga aga na 2D na ihe workflow bụ maka ya.
Akụkụ mbụ nke ngo bụ ike gị ndabere na mbụ ederede oyi akwa. Na nke a obere ihe m ga-eji a darker ndabere na-egbuke egbuke ederede dị anyị na-aga. Mbụ, si zụlite anyị na-kere iji oyi akwa> ọhụrụ> siri ike, m na-eji a ọchịchịrị isi awọ agba ebe a.
Ọ na-akwụ na a ka nwere ihe echiche banyere ihe ọ bụ ị na-achọ ime, m na-aga nwere a dị mfe dobe akwụkwọ mpịakọta ederede na a static okwu 'Edge' na mgbanwe gburugburu ya ike ọhụrụ okwu.
Ịmepụta ederede ihe maka Edge ọkọkpọhi anyị njikere amalite eke anyị okwu play.
2. eke Components
Ozugbo anyị kpebiri ihe anyị na-aga-eme, anyị mkpa ike ọ bụla ederede akụrụngwa na anyị ga-eji na-aga aga. Otu n'ime ihe kwa ibe nke ederede.
Ee, ya anya ka nzuzu, ma ọ bụla otu nke akwụkwọ ozi bụ a iche iche ihe na anyị nwere ike ikpokọta na anyị arịlịka okwu 'onu' ike ọhụrụ okwu. Nke a bụ ụlọ ngọngọ nke otú anyị ike anyị kinetic typography, otú ugbu a, anyị nwere components Ka ibugharịa na.
3. Ịmepụta mbụ Keyframe
Dum usoro e wuru gburugburu keyframes, ndị a bụ flags na usoro iheomume nke na mpaghara ọ bụla nke na-agwa Mgbe mmetụta ebe ha kwesịrị na na kpọmkwem oge. Mgbe mmetụta ike bụ ya ike na jupụta na-aga aga n'etiti ndị dị iche iche keyframes gị ịtọ, na n'ebe a anyị ga-uru. Ya mere, na-amalite na anyị ga-ike anyị mbụ keyframe. Lee, anyị ga rụọ ọrụ oyi akwa anyị chọrọ ma zoo ndị fọdụrụ n'ihi mfe, mgbe ahụ, egosiputa mmalite okwu ka anyị na chọrọ.
Ugbu a, anyị nwere okwu 'Nkwa', mejupụtara anyị arịlịka ederede 'Edge' na-arụsi ọrụ ike ederede ihe 'pl'. Na-eme n'aka na 'pl' oyi akwa bụ ọrụ, anyị nwere ike ahụ na-aga n'ime ya usoro iheomume ntọala ịgbanwe> Position ebe anyị pịa elekere nkwụsị ka mbụ keyframe n'ihi na ihe.
Ugbu a anyị nwere anyị mmalite mgbe melite, otú anyị na-jidesie ụfọdụ ije.
4. N'ịga ederede
Ugbu a anyị nwere mbụ anyị keyframe setịpụrụ na 15 okpokolo agba akara, anyị nwere ike aga azụ ka 0 okpokolo agba na ike a ọhụrụ keyframe na 'pl' kwụsịrị n'elu ihuenyo. Nke a ga-enye mmetụta nke ya na idobe ala n'ime ebe ná mmalite nke usoro. Nke a mere dị ka iso, ịkpali oge cursor na usoro iheomume a, n'oge a mmalite, mgbe ahụ-akpali ihe na-achọrọ ebe. The Keyframe e debere-akpaghị aka.
Ebe i nwere ike ịhụ 1st keyframe na 15 etiti akara ke gold.
Na ebe a na anyị na-ahụ keyframe ọnọdụ set. Nke a bụ 2nd keyframe anyị setịpụrụ, ma akpa ke usoro iheomume, otú a ga-ebe 'pl' amalite n'oge usoro.
Ugbu a anyị anya ka anyị na 3rd na 4th keyframes, ha na-mere na n'otu ụzọ ahụ, na nke atọ n'etiti na 4th anya ihuenyo na ala.
Ugbu a, anyị nwere usoro ebe 'pl' Object amalite anya ihuenyo, tụlee ala n'ime ebe, mgbe ahụ, tụlee anya ihuenyo nsoroụzọ ala. The akpali ihe bụ na anyị nwere ike iṅomi ndị mmegharị ma tinye ha n'ọrụ ọ bụla ọzọ ihe, ka anyị hụ otú na dabara n'ime oru ngo.
5.-agbakwụnye na ndị ọzọ na akpọkwa
Ugbu a, site na-ahọpụta ndị 4 keyframes ọnụ anyị nwere ike iṅomi ha, ma mado ha mgbe ọ bụla usoro iheomume anyị na-amasị n'ime osisi maka ndị ọzọ ederede akpọkwa. Ọ bụrụ na anyị dechapụ site 15 okpokolo agba oge ọ bụla, nwere ike ịmepụta mmetụta nke akwụkwọ ozi idobe ala na-etolite okwu ọhụrụ na-akụ aka aga na ndị kwụsịrị na ihuenyo.
Idetuo keyframes bụ nanị a okwu nke iwu ma ọ bụ Control C, dabere na gị n'elu ikpo okwu, na-ahọpụta ndị ọhụrụ oyi akwa, mwube oge cursor na nri isi na iji iwu ma ọ bụ akara V ka Tapawa keyframes na.
Ị nwere ike ka ịhazie debere dabere na otú gị akwụkwọ ozi ndị ahụ ahaziri, ma nke a na-enye ohere ị mepụtara ihe na-akpali mmetụta nnọọ ngwa ngwa.
Ebe a na usoro iheomume echiche na-maximized-ekwe ka ị na-ahụ dị iche iche nke 4 keyframes na otú ha na-ahaziri site overlapping na-ekwe ka ọdịdị nke okwu nke ọzọ na-akụ aka aga na anya ihuenyo.
Nke a ka na-egosi na mmetụta anyị na-eke dị ka pl tụlee anya ihuenyo na Dr-ewe ya ebe.
6. Text Adalata
N'ihi na akụkụ ikpeazụ anyị ga-ele anya na ọzọ mmetụta na-dị mfe ịgbakwunye ma nnọọ irè. Rụchaa nta anyị ngosi anyị chọrọ ejedebe na okwu 'Live ndụ na' pụtara na-esote anyị mgbe static 'Edge' Ozugbo animated okwu niile na-adapụsị ihuenyo. Ihe kacha ụzọ ime nke a bụ ịjụ oyi ya.
Mbụ, anyị na ike ọzọ Text Object na chọrọ okwu na ya.
Ugbu a, anyị chọrọ nke a na-egosi mgbe ndị ọzọ okwu ndidi na-arahụ, otú ahụ ugbu a anyị nwere ya na ebe, anyị chọrọ anyị mbụ keyframe maka ihe a na-na-dị na njedebe nke ndị ọzọ niile na-aga aga. Mwube nke curser na ikpeazụ keyframe nke ikpeazụ okwu anyị họrọ a ihe, na mgbe ahụ họrọ Opacity si ịgbanwe menu, ka ọ 0%, nke pụtara na ọ bụ adịghị ahụ anya, na ịtọ na ka anyị mbụ keyframe n'ihi na nke a ihe.
Ugbu a, anyị ịkpali oge cursor tinyere 15 okpokolo agba ọzọ, ịgbanwe Opacity 50%, setịpụrụ a keyframe, mgbe ahụ, na-eme ikpeazụ nkwaghari, ọzọ 15 okpokolo agba, ịgbanwe Opacity ka 100% na ịtọ ikpeazụ keyframe.
Nke a na-ikpeazụ nkebi ahịrịokwu fading na na ebe na njedebe.
Ọ bụ ezie na, dị ka anyị pụrụ ịhụ, na mmetụta na-adịghị mgbagwoju anya ike, ha dị nnọọ irè, na oké ụzọ ịmepụta anya ini enye okụtde ọdịnaya bụ nri na ọnọdụ dị ugbu a na ndị na-ekiri na-Ekwughị.
The ọzọ nhọrọ dị nwere ike doro anya niile ga-eji dị ọma, na egbuke gburugburu na na-eji dị ka akụkụ nke oru ngo. Ke adianade do niile 3D nhọrọ ndị dịnụ kwa aka spinning na Z-axis nakwa dị ka ọzọ nhọrọ dị ka igwefoto ije maka ahụmahụ karịa. Otú ọ dị, ebe ebe a anyị anya na ndị isi nke Usoro, e nwere ezu nhọrọ na-eme ka mmasị oru ngo tupu transitioning n'ime elu ndị ọzọ nhọrọ, eziokwu na ha nwere ike mere nnọọ nta oge na na na obere ego nke mgbalị dị a ego.
Olee otú Play MKV on Xbox One
Ihe ị chọrọ maka Video edezi: Video edezi Equipment
> Resource> Video> Olee otú Mee a kinetic Typography Video na Mgbe mmetụta